Iyo yekuwedzera mhedzisiro: Sarudza kuti uwedzere kubudirira kwako - Darren Hardy (Audio) - Afrikhepri Fondation
Iwo Mhedzisiro Yekuwedzera: Sarudza Kuwedzeredza Kubudirira Kwako - Darren Hardy (Audio)
Darren Hardy akaona, akanzwa uye akaedza chinenge zvese. Mune iri rakananga uye rakatendeka odhiyo bhuku, anoratidzira hwaro hwebudiriro uye anotyora nepfungwa mbiri dzakashata: iyo yekusafunga maonero ekufunga kuti kubudirira kunoitika kune vamwe uye nemaonero akanaka anotenda kuti kune mabikirwo. zvishamiso kuti zvibudirire. Chero ani zvake anogona kubudirira, chero bedzi vachiratidza kusagadzikana uye kurudziro.
Iri bhuku rinotarisa pane izvo zvakajairwa kune vese vatungamiriri zve:
Bvisa tsika dzakaipa dzinodzivirira kufambira mberi
Gadzira zvidzidziso zvakakosha pakushandura-kwakadzama
Ziva maitiro ekuchengetedza kukurumidza kwekutanga.
Chakavanzika chekuchinja hupenyu hwako uye kuita kuti zviroto zvako zvizadzikiswe? Unganidza idzi nheyo dzakakosha uye uzvishandise kupfuura nguva, kuisa mikana yose mukuda kwako uye pakupedzisira sarudza zvaunotarisira.
Mhedzisiro yacho: Sarudza kuwanda kubudirira kwako
1 nyowani kubva pa21,45 €
Tenga 21,45 €
kubva munaGunyana 22, 2020 9:21 AM
Release Date 2020-06-24T02:00:00-00:00
urongwa Shanduro yakazara